वित्तीय कानून | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: वित्तीय कानून
प्रतिबन्धित आयमा एकल कर । यो के हो? मलाई भन्नुहोस्
निहित आयमा एकल कर। ... यो के हो? हामीलाई भन्नुहोस् अधिक यूटीआईआई नगरपालिका जिल्लाको कानूनले प्रभावमा राखीएको छ, सामान्य कर प्रणालीको साथ लागू गरीन्छ र केहि प्रकारहरूमा मात्र लागू हुन्छ ...
एक बैंक मार्फत संपार्श्विक खरिद गर्नुहोस्
बैंकमार्फत संपार्श्विक सम्पत्तीको खरीद फिर्ता हुनेछ, तर मलाई पक्का छैन कि बैंकले यो सम्पत्ति आफैं बेच्ने अधिकार पाएको छ किनकि संघीय कानून "ओन प्लेज" ले बिभिन्न प्रक्रियाको लागि प्रदान गर्दछ, र संघीय कानून "अन ...
अदृश्य जानकारी के हो? जवाफ सरल छ!
भित्र जानकारी के हो? उत्तर सरल छ! एक उद्यम को गतिविधिहरु को बारे मा गोप्य गुप्त जानकारी, फर्म। INSIDER जानकारी (इन्जीरियर भित्र जानकारी) - एक उद्यम को गतिविधिहरु को बारे मा गोप्य जानकारी, फर्म। हामी त्यस्ता जानकारीको बारेमा कुरा गर्दैछौं ...
रूसी लट्टोमा जीतबाट कति प्रतिशत लिइन्छ?
रूसी लोट्टोमा जितको रसबाट कति ब्याज लिन सकिन्छ? %०% तुरून्त र जीतबाट% the%। राज्यलाई धोका दिन सकिन्न, तर यो हुनु पर्छ। कर मा रूसी संघ को कानून को अनुसार ...
मलाई भन्नुहोस्, जस्तै कि हामीसँग भुक्तानी शह को लागि पैसा को लागी मुआवजा छ। सेवाहरू?
मलाई भन्नुहोस् कसरी कर कार्यालयले भुक्तानी गरिएको महका लागि पैसा क्षतिपूर्ति दिन्छ। सेवाहरु? पीठो र संकुचित हावाको साथ तिनीहरू कहिल्यै एक पैसा पनि फर्काउँदैनन्। यसलाई उपचारको लागि सामाजिक कटौती भनिन्छ। सही उनको ...
TCS मा कर रिपोर्ट कसरी पठाउने?
कसरी TCS मार्फत कर रिपोर्टहरू पठाउने? तपाईंले टेलिकम अपरेटरसँग सम्झौता गर्नु आवश्यक छ। प्रणालीको काममा तीन पार्टीहरू भाग लिन्छन्: करदाता, विशेष टेलिकम अपरेटर र कर कार्यालय। टेलिकम अपरेटरको रूपमा ...
कृपया मलाई भन्नुहोस्, कसरी मध्यस्थता प्रबन्धक बन्नु हुन्छ?
के तपाई मलाई आर्बिट्रेशन प्रबन्धक कसरी बन्न सक्नुहुन्छ बताउन सक्नुहुन्छ? कानून, एक दिवाली व्यवसायीको कानूनी स्थिति परिभाषित पछिल्लोको लागि आवश्यकताहरू स्थापना गर्दछ। आवश्यकताहरूको पूरा सेट सामान्यतया दुई समूहमा विभाजित हुन्छ: सकारात्मक, जुन उम्मेदवारको हुनुपर्दछ ...
निपटान खाता। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनुहार के फरक छ?
हालको खाता। अवधारणा? यो अनुहारको भन्दा कसरी फरक छ? रूसी संघ को केन्द्रीय बैंक को निर्देशन बाट २ 28-I “… २.।। हालको खाताहरू कानुनी संस्थाका लागि खोलिन्छ जुन क्रेडिट संस्था होईन, साथै व्यक्तिगत उद्यमी वा स्थापनामा संलग्न व्यक्ति ...
OJSC को शेयरधारकहरूको जिम्मेवारीको बारेमा मलाई बताउनुहोस्?
OJSC को शेयरधारकहरु को जिम्मेवारी को बारे मा मलाई भन? यो लेखले स्थापित गर्दछ कि यदि कम्पनीको दिवाली (दिवालियापन) यसको शेयरधारकहरू वा कम्पनीमा बाध्यकारी निर्देशनहरू दिने अधिकार भएका अन्य व्यक्तिहरूको कार्यहरू (निष्क्रियता) को कारणले भएको हो भने ...
एक पुन: फिर्ता दन्त प्रोस्टेटिक्स मा कर फिर्ती गर्न सक्छ?
के निवृत्तिभरणकर्ताले दन्त प्रोस्थेटिक्समा कर फिर्ता गर्न सम्भव छ? कर कटौती प्राप्त गर्न छोरीले कुन कागजातहरू स collect्कलन गर्नुपर्दछ? उनले दन्त प्रोस्थेटिक्सको लागि मेरो लागि भुक्तान गरिन्। म एक निवृत्तिभरणकर्ता हुँ। के निवृत्तिभरणले कर तिर्दछ? ...
Collectionण स Collection्कलन एजेन्सी LLC - के यो अर्को तलाक हो? भित्र
Collectionण स Collection्कलन एजेन्सी LLC - के यो अर्को तलाक हो? gt भित्र; यी सors्कलकहरू कहाँबाट आए? एलटी बैंकले नराम्रो debtण स sha्कलनको शार्गामा बेच्यो सानो शेयरको लागि। र अब यो उनीहरूको व्यक्तिगत चासो हो।
तपाईंको सम्पत्तीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने व्यक्तिहरूको ज्यानबाट बच्न, तर तिनीहरूको चीजहरू हटाउन सकिन्छ?
तपाईंको सम्पत्तिलाई कसरी जोगाउने उनीहरूको बेलिफबाट जोगाउनुहोस् जसले तिनीहरूसँग केही तिर्दैन, तर तिनीहरूका चीजहरू लिन सक्दछन्? डुब्ने व्यक्तिको उद्धार उसको छेउमा जोको कार्य हो। यदि तपाईं धेरै डराउनुहुन्छ भने ...
आज रूसमा नागरिकताको गैर-करयोग्य न्यूनतमको आकार के हो?
रसियाका नागरिकहरूका लागि हाल करमुक्त न्यूनतम आम्दानी के हो? कसरी आय प्राप्त हुन्छ मा निर्भर गर्दछ? रूसी संघको कर कोडले व्यक्तिगत आयकरको लागि गैर कर योग्य न्यूनतमको रूपमा यस्तो अवधारणा समावेश गर्दैन। मैले यसमा तपाईंको टिप्पणी पढें ...
बिजुलीको चोरीको लागि ठीक को गणना
बिजुली चोरी भएको जरिवानाको रकमको हिसाबले विद्युत चोरीलाई प्रशासनिक अपराधको एक प्रकारको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, जुन नागरिक प्रक्रियाबाट हुने वास्तविक क्षतिको पुनःप्राप्ति र अपराधीहरूलाई प्रशासनिक कार्यवाहीमा पुर्‍याउँछ ...
आर्थिक स्रोतहरू के हुन्?
आर्थिक संसाधन के हो? संसाधन आर्थिक रूपले संसाधन आर्थिक आर्थिक (फ्रान्सेलीबाट। संसाधन सहायक साधन) आर्थिक सिद्धान्तको मौलिक अवधारणा, अर्थ स्रोतहरू, उत्पादन सुनिश्चित गर्ने माध्यमको अर्थ। आर्थिक संसाधनहरू प्राकृतिक (कच्चा माल, भू-भौतिक), मा विभाजित छन् ...
मलाई संघीय संघमा बैंकिंग गतिविधि व्यवस्थापन गर्ने मुख्य कानुनहरुलाई बताउनुहोस्
मलाई रूसी संघमा बैंकिंग संचालन गर्ने मुख्य कानूनहरू बताउनुहोस् बैंक र स on्घीय कानूनको केन्द्रीय बैंकको स Control्घीय कानूनको क्रान्ति संघीय कानूनको क्रियान्वन को इतिहासमा मुद्रा इतिहास इत्यादि सम्बन्धी कानूनको गठन रूसी संघको संविधान ...
रातो माछाको भुक्तानी कसरी गणना गर्ने
२ time देखि night रातको घण्टा रातको समय २२.०० देखि 23.०० सम्म भुक्तानी कसरी हिसाब गर्ने, भुक्तानी १०% ले बढ्छ, कसरी भए पनि) माथिको केवल एक स्पष्टीकरण थप्न आवश्यक छ। हटाउन योग्यको अवस्थामा ...
चाहे सीमा को प्रतिमा कला को अधीन गिरने अपराध हो। 159 यूके आपराधिक कोड धोखाधडी वा 8 वर्ष पछि डीएम प्रारम्भ गर्न सक्छ?
के सीमाहरूको विधान को कला अन्तर्गत एक अपराध हो। 159 रूसी संघ को आपराधिक कोड को एक धोखाधडी, वा तपाईं एक UD 8 वर्ष पछि शुरू गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ फौजदारी संहिता द्वारा स्वीकृत कार्यहरूको लागि कुनै सीमित अवधि छैन ...
कर्तव्य - यो कर हो?
शुल्क - यो कर हो? हो ड्युटी भनेको राज्यको कानून द्वारा प्रदान गरिएको रकममा केहि कार्यहरु को प्रदर्शन मा अधिकृत आधिकारिक निकायहरु द्वारा लगाईएको शुल्क हो। शुल्कहरू, विशेष रूपमा दर्ता र टिकट शुल्कहरू, ...
कार पट्टेमा किने, यो के हो र कसरी हुन्छ
पट्टामा किनेको कार, यो के हो र यो कसरी हुन्छ? कसैले तपाईंलाई कार खरीद गर्दछ, र केही समय तपाईं पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ। व्यक्तिको लागि लाभदायक पट्टे ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,602 प्रश्नहरू।